Members of (Burmese) Buddhist temple files suit against resident monk | Daily Record, The (Baltimore) | Find Articles at BNET | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Buddhism » Members of (Burmese) Buddhist temple files suit against resident monk | Daily Record, The (Baltimore) | Find Articles at BNET	0
Kyae Mon has written 576 post in this blog.
Comments By Post“ရှေးရှေးက ဆင်ဖြူရှင်မနန်းမတော်မိဘုရားခေါင်ကြီးကောင်းမှူ့ အခုမှာတော့ကျောင်းအိုအို” - ko pauk mandalay - မဟာရာဇာ အံစာတုံးလူဝကြီးနှင့် လူပိန်ကြီး - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - မဟာရာဇာ အံစာတုံးသန့်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ အကြောင်း - အတွေးလေး - မောင် ပေကောင်းတာလည်း ရှိတယ်။ .......ဆိုးတာလည်းရှိတယ်။ - Mr. MarGa - padonmarစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၄ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး - ၂ ) - မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု - Foreign Residentမန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း (ပြခန်းအမှတ် တစ်) - Nyo Win - may julyကိုပေါက်(မန်းလေး)၊ ဆြာအုပ်၊ Mလုလင်3in 1 - (ကဆုန် ညောင်ရေသွန်းပွဲ) - Mr. MarGa - ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ်Floral Gift - Macro Series - Mr. MarGa - မဟာရာဇာ အံစာတုံးနေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၆) - မောင် ပေ - Mr. MarGaသစ်ပင်တစ်ပင်၏ကျဆုံးခန်း...Kathit Tree.. - မောင် ပေ - Foreign Residentမွေးနေ့ နှင့် ကျမ အမှတ်တရ - Mr. MarGa - may julyဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့တွက် ဗုဒ္ဓနေ့ လက်ဆောင် - Mr. MarGa - ဆူးဖတ်ရွေး ရဲ့ CHANGE (Step 1.0) - Mr. MarGa - kaiအတု - Nyo Win - ကြက်အူလှည့်စိတ်ကူးတည့်ရာ လက်တဲ့စမ်း အာတီဒုံရဲ့ ဃနာနို့ဆွမ်း - ကြက်အူလှည့် - kyeemiteဒါရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဲ့လား? - kyeemite - padonmarရွှေရောင်လွှမ်းတဲ့ ပြည်မြန်မာ - Mr. MarGa - padonmarလုမ္ဗိနီ သာမော အင်ကြင်းတောသို့..... - နွေဦး - ဆူးစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၃ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး ) - Foreign Resident - Foreign Residentခရီးသည်လေးသို့ - nway kyu - marblecommetEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77895 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70581 Kyats )naywoonni (67484 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66922 Kyats )cobra (62187 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (59523 Kyats )MaMa (58061 Kyats )Top Posts & Pagesသင်ဇာဝင့်ကျော် နဲ့ မဟူရာ အလှ...